जंगबहादुरले बनाएका ‘रानी’ प्रधानसेनापति थापाले ‘म्याडम’ पारिदिए - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७५ असोज ५ गते १२:५५
काठमाडौं, ५ असोज । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनामा दुई विषय अनिवार्य र एउटा सम्बोधनलाई परिवर्तन गर्न खोजेका छन् ।
उनले नेपाली सेनाको मुख्यालयसहित पृतना, बाहिनी, गण, गुल्ममा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रपतिको तस्बिर अनिवार्य राख्न भनेका छन् भने जर्नेल पत्नीलाई ‘रानी’ भनी सम्बोधन गर्न नपर्ने विकल्प खुला गरेका छन् । उनले रानीलाई ‘म्याडम’ भन्न सकिने निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
थापाले माथाहतका कार्यालयमा आफ्नो तस्बिर अनिवार्य नरहेको पनि सर्कुलर गरेको सैनिक स्रोतले उल्लेख गरेको छ । नेपाली सेनाको लामो इतिहासमा थापाले केही परिवर्तन गर्न खोजेका हुन् ।
यसमध्ये जर्नेलपत्नीलाई किन ‘रानी’ नभन्ने र किन भनिएको थियो ? भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । राजा सुरेन्द्रका पालादेखि यो सम्बोधन सुरु गरिएको थियो ।
सेनाका प्रमुख नै श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा थिए । त्यसकारण सैनिक प्रमुखको गलामा तीन तारा जडित हुन्छ । सैनिक सेवामा आफ्ना भाईभारदारलाई जर्नेलको सुविधा दिएका जंगबहादुरले नै उनका पत्नीहरूलाई ‘रानी’ सम्बोधन गर्ने आदेश जारी गरेका थिए ।
अर्को बुझाईमा जंगबहादुर खलकले राजपरिवारका मात्रै छोरी बिहे गर्ने हुँदा पत्नी स्वतः रानी सम्बोधनकी लायक हुन्थिन् । जो, सेनाका वरिष्ठ पदमा रहन्थे । यहि परम्पराको लयमा नेपाली सेनाका जर्नेलपत्नीलाई रानी भन्ने प्रचलन चली आएको थियो ।
अझ थप प्रमाणका आधार राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष तथा अन्तिम श्री ३ मोहन शम्शेरका नाती पशुपति शम्शेरबाट सम्बोधनको पुष्टि हुन्छ । उनलाई पनि ‘राजा’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ । यसको अर्थ हो, सैनिक प्रमुख वा जर्नललाई जनताले स्वतः राजा भनी सम्बोधन गरेपछि उनकी पत्नी ‘रानी’ हुन्थिन् ।
यहि परम्परा सेनामा थियो जसलाई थापाले परिवर्तन गरिदिए । उनले आदेश दिएका छन्– अब रानी अनिवार्य छैन ‘म्याडम’ भने पनि हुन्छ । जुन यसअघिका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानसेनापतिले गरेका थिएनन् ।
कतिपय सेनाका पूर्वअधिकारीले सम्बोधन परिवर्तन गर्दैमा सबैकुरा परिवर्तन हुन नसक्ने बताउँछन् । अनुशासनको कसीमा सेना रहनुका खास कारणमा सम्बोधन पनि एक रहेको उनीहरूको बुझाई छ ।
‘राणाका सन्तानमात्र होइन, जनताका छोरा प्रधानसेनापति हुँदा, जर्नेल हुँदा उनका पत्नीलाई पनि त्यहि सम्बोधन हुँदै आएको छ’, एक पूर्वजर्नल भन्छन्,‘यसले जनतालाई पनि राजा जत्तिकै सम्मान दिने अनुशासन कायम गरेको भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।’
तर सैनिक प्रमुखले गरेको निर्णयलाई सेनाले कति गतिशील पारामा कार्यान्वयन गर्ला ? लागेको बानी हटाउन एउटा निर्देशनले मात्र काम गर्ला त ? भन्ने पनि प्रश्न उठेका छन् ।